War - Hordhaca Habka Wax-u-Qabashada
Hordhaca Habka Habka Hordhaca
Hordhaca geedi socodka
3/4 oo ka mid ah alaabada dharbaaxo ee wax lagu nadiifiyo waxaa soo saaray wax-u-qabashada xoqida. Nidaamka soo-saarista ayaa ah in lagu qasbo maaddada iyada oo loo marayo dalool ama ay u dhinto wax soo saar.
Nidaamka wax-u-qabashada dharbaaxo ee extrusion wuxuu ka kooban yahay 5 tallaabo: 1. preform caag ah (dheecaanka tubbada balaastiga ah ee godan). 2. Xir caaryada fardoodka ku taal parison, xaji caaryada oo jarjar parison-ka. 3. Ku afuuf caaryada darbiga qabow ee daloolka, hagaaji furitaanka oo ku hay cadaadis cayiman inta lagu jiro qaboojinta. 4. Fur caaryada oo ka saar qaybaha afuufay. 5. Jar flash-ka si aad u hesho badeecada la dhammeeyay.
Nidaamka wax taaj oo kale oo xoqan oo xoqan
Wax taaj oo kale oo lagu buuxiyo godka 'Extrusion hollow' ayaa ah in lagu dhalaaliyo oo lagu caagayo balaastigga wax lagu shubo, ka dibna laga soo dhex saaro maqaarka tubular ah iyadoo loo marayo dhinta tuubada. Marka parison uu gaaro dherer cayiman, parison-ka waxaa lagu kululeeyaa caaryada garaaca. Hawada is dulfuulan ayaa markaa la afuufayaa si parison looga dhigo meel u dhow darbiga godka caaryada si loo helo qaabka godka, iyo xaalad ku haynta cadaadis cayiman, qaboojinta iyo qaabaynta ka dib, sheyga la afuufay waxaa lagu helaa demolding. Geedi socodka ah ee wax taaj oo kale dharbaaxo waa sida soo socota.
Caaga, bacda balaastikada iyo xoqida par parular tubular → xirida caaryada mold wax taaj oo kale sicir bararka → qaboojinta opening Furitaanka caaryada out alaabta la soo bax
Wax taaj oo kale dhirbaaxada dhirta guud ahaan waxaa loo qaybin karaa shanta talaabo ee soo socota, sida ku cad Jaantuska 1-1.
① Polymer-ka ayaa lagu dhalaaliyaa qalabka wax lagu shubo, dhalaalkiisana waxaa loo sameeyaa lakab yar oo tubular ah iyadoo loo marayo dhinta.
②Markay parison gaarto dherer horay loo sii cayimay, caaryada dharbaaxo ayaa la xirayaa, parison waxaa lagu xirayaa inta udhaxeysa labada qaybood ee caaryada, baarkana waa la jarayaa oo waxaa loo wareejinayaa saldhig kale.
Ject Ku duri hawo isku cadaatay parison-ka si ay u buufin parison-ka si ay ugu dhawaato godka caaryada si ay u sameysmaan.
Pen Fur caaryada oo soo saar badeecada la mideeyay.